एआइजी बढुवामा आर्थिक चलखेल भएकै हो ? जवाफ चाहियो : प्रचण्ड::netpatrika
एआइजी बढुवामा आर्थिक चलखेल भएकै हो ? जवाफ चाहियो : प्रचण्ड
काठमाडौं, जेष्ठ १६ । संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै बैठक अवरुद्ध गरिएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन लगायतका विषय उठाउँदै एकीकृत माओवादीले बैठक बस्ने बित्तिकै अवरुद्ध गरेको हो ।
अपरान्ह ३ बजे फेरि बसेको बैठकमा बोल्दै एकीृकत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलेप्रतिपक्षीहरुलाई पेलेर जान खोजेको आरोप लगाउदै सहमतिको कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने बताए ।
एआइजी बढुवा प्रकरणमा समेत आर्थिक चलखेल भएको भन्दै त्यसको जवाफ दिन समेत दाहालले माग गरे । उनले बढुवा गर्दा वरिष्ठतालाई समेत मिचिएको दाबी गरे ।
त्यसअघि दाहालले सरकारले एकलौटी रुपमा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम रकमान्तर गरेको आरोप लगाउँदै बजेट निर्माणका क्रममा पनि प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफलै नगरेको आरोप पनि लगाए ।